ဂဇက်ရွာသား တစ်ဦး အမှူးပြု
စိတ်အားလူအားငွေအားစိုက်ထုတ်ကြတဲ့ သူတွေ ကို သာဓု အရင်ခေါ်သွားပါတယ်။
သာဓု သာဓု သာဓုပါခင်ဗျား…
ဘောနပ်စ်များများရပြီး ကြိုက်တဲ့မင်းသားတွေ ဂေးသွားရသောဘေးမှ ဝေးပါစေကွယ်…
ပြန်လည်းလာခဲ့ ဘောနပ်စ်ထွက်ရင်လည်းထပ်လှု… အဟိ
ကိုယ်က ကြိုက်လိုက် သူများနောက်လိုက် ဘွမှလည်း ကင်းဝေးရပါလို၏။
အိုစာ မင်းစား ကောင်းကောင်းနဲ့ ..
အိုကံ မင်းကံ ပဲ ကောင်းချင်ပါတယ်။
ပြောရင်း ခေါင့် ကို သတိရသွားပြီ။
ကျွန်မလဲ အလှုငွေကူညီကောက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်ကျောက်စ်ရေ။ ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်မဟုတ်လား။
ထပ်ပြီး အားဖြည့်လိုက်ပါပြီ မွသဲရေ… ကျေးဇူးပါခင်ဗျ…
ကျနော်လည်း ကျပ်တသိန်း ပါဝင်လှူ ပါတယ်။ငွေကတော့ ကျနော့် ညီ သူရန်ကုန်ရောက်တဲ့ရက်မှာ လာလှူ ပါလိမ့်မယ်။
စာရင်း တို့ထားလိုက်ပါ့မယ် ကို kyawtheinmyint ခင်ဗျာ…
ကိုကျော်သိန်းမြင့်-အလှူငွေ တစ်သိန်း မနေ့ကဘဲ (၂ရက် ၁၁လ) လက်ခံရရှိပါတယ်ခညာ
YUYA MON ရေ…. PayPal ကနေ လွှဲလိုက်တဲ့…
အမေဂျီးကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ၊ လက်ခံရရှိပါတယ်…
သာဓု… သာဓု… သာဓုပါ ခင်ဗျာ…
ကျုပ်ကတော့.. လှူတဲ့သူတွေကို.. လှူမယ်လို့.. ပြောပြီးသားနော..။
မဲဖောက်ပြီးပျော်ကြရအောင်.. ငွေမဟုတ်.. ပစ္စည်းပဲလှူမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့်.. နာမယ်မပါမှာစိုးလို့ရယ်…။ ငါ့လက်ကလွတ်ဗြွတ်အလှူမဟုတ်တာလို့.. ဦးဆောင်သူတွေကိုယုံကြည်တာကြောင့်ရယ်..။ မူလအလှူမှာလည်း.. ၅ဒေါ်လာ ပါပါ့မယ်..။
ဟုတ်ကဲ့… သဂျိုင်ခီး ၅-ဒေါ်လာလို့ စာရင်းတို့ထားလိုက်ပါ့မယ်…
… ဒေါ်လာ ၂၀၀ဖိုးလောက်မှန်းတယ်..။
မန်ဘာတွေစုပြီး.. ခရီးသွားမယ်ဆို.. ဇီဇီရဲ့ လှူငွေ.. ကျပ် ၁သိန်းကို သီးသန့် အသုံးစရိပ်အဖြစ်.. ပို့ပေးဦးမယ်ဖြစ်ကြောင်း..။
Khaing Zar Win (99166 Kyats )
တညားလည်း ဒီ တစ်ပတ်မှ စ ဝယ် ရမှာ။
မွမွတွေ အတွက်ပဲ စဉ်းစားလို့ ရသေးတယ်။
အကိုကြီးတွေ ဘာလိုချင်တုန်းမသိ (အလှူလိုက်မဲ့ အကိုဂျီး တွေကို ပြောတာ)
ဒဘယ် ဘလွတ်လို့ တော့ မပြောကြနဲ့။
ပုဆိုး ဆင်တူ ယူမားးး
ယိမ်း က ရအောင်။
ကချင်ပုဆိုး ဆိုရင်တော့ ဖွေးဖွေးတံဆိပ် ပါတာလေး… ရှာကြည့်ပါဦးနော်..
လက်ဆောင်လှလှလေးတွေ ဝယ်ယူစုဆောင်းနေပါကြောင်း… ခွိ
မနောလည်း တတ်နိုင်သလောက် ပါပါမယ့်ရှင်
ညီအစ်မများမှတစ်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်း ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်လိုက် ပါမည်။
ကျေးဇူးပါ ကျောက်စ်။ :))
ကျေးဇူးပါ အရီး မြစပဲရိုး မုတ်ဆိတ်ခင်ဗျား…
ဘယ်နေ့ နောက်ဆုံးလဲ.. လက်ရှိဆိုရင်တော့ ၅ ထောင်ကျပ်လောက်ပဲ ထည့်နိုင်မယ်… ကြာဦးမယ်ဆိုရင် စုဘူးလေးနဲ့ စုထားပေးမယ်… လူအားကတော့ ပါမယ်ဗျို့…
နောက်ဆုံးရက်ကတော့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ပါ ကိုရင် သနင်းရေ…
ဆြာမိုက်ရဲ့ ဒါနပါရမီကိုလည်း စောင့်မျှော်လျှက်ပါ… အဟိ
သွားမယ့် ရက်က ပိတ်ရက် ဖြစ်ရင် ကောင်းမယ်ဗျာ… လွတ်လပ်ရေးနေ့လောက်ဆို.. တသောင်းထည့်မယ်… မှတ်ထားလိုက်… အဲနေ့ ဖြစ်ဖြစ်.. ဦးဆာ နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပေးမယ်… အလှူငွေပဲလား.. ပစ္စည်းရော.. ဆိုကြပါစို့.. ရုံးမှာ ကော်ဖီလှူမလား.. ဘာလှူမလဲ… မေးကြည့်ပေးမယ်.. ပိုက်ဆံလဲ ကောက်ကြည့်မယ်… အိုကေနိုင်လား…
သွားမည့်ရက်က အများအဆင်ပြေအောင် ပိတ်ရက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
လှုတာတော့ အဆင်ပြေသလို လုပ်ပါ ကိုရင်
ကျနော်ဖေစ်ဘုတ်က မိတ်ဆွေများကိုလဲ ရှယ်ယာလုပ်ပေးပါမယ်
နောက် မန်းလေးမြို့ ကနေ ကောက်ခံ ရတဲ့ ငွေ အတွက် ဘဏ်လွှဲခ ကို ကျနော် စိုက်ပါမည်
သာဓုပါ ကိုပေါက်ရေ ၊ အခုလိုကူညီတဲ့အတွက် အားတက်မိပါတယ်…
မပါလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ… ဘောနပ်စ် ထွက်မည့်အချိန်အထိ စောင့်ပေးမှာ
အထက်ဖေါ်ပြပါ ပို့စ်များမှဓတ်ပုံများ ယူသုံးခွင်ပြုပါခင်ဗျာ ။
ကျွန်တော်များ ပေ့ခ်ျနဲ့ဂရုမှာ နှိုးဆော်ချင်လို့ပါခင်ဗျ
လွတ်လပ်စွာမျှဝေနိုင်ပါတယ် ရဲကိုကိုရေ… အဟိ
မနိုလဲ အလှူ ငွေ ထဲ့ပါမယ်
သာဓုပါ… ကျောင်းအမ ရဟန်းအမဂျီး (ကိုဂျီးကို ရဟန်းဝတ်ပေးလိုက်) မနိုရေ…
ဆြာကျောက်ရဲ့ အလှုနိုးဆော်စာ အရေးအသားကတော့ ကောင်းပါ့ပေ့ဗျာ။
အဟီး… ရွာပြန်ပြီး ဂေါပကလုပ်စားရင် ကောင်းမလားလို့…
ကိုဂျီးခ… အလှုငွေ ဂဏန်း ဘယ်နှစ်လုံးလဲ သာပြော… ရှေ့က ၉ ထည့်ပေးမယ်
အင်း အဲလိုဂျီးလားဗျ ဇန်နာဝါရီ ဆြာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ထူးမြတ်မတိုင်မှီ ထဲ့ပါမယ်ဗျ။
ဒါနဲ့ ဘဏ်စာရင်းလေးရေးပြထားတယ်လေ (မအိကြည်ပြာစိုး – အကောင့်အမှတ် – 0016600100035629 – CB Bank) ဒါနဲ့ ဘယ်မြို့နယ်ဘဏ်လဲဗျ ဥပမာ – ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ် အဲလို အဲလို တွေညွှန်းရမလားဘဲနော်။
ဆရာခရေ … သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
အပေါ်ကပို့စ်ထဲမှာ ထပ်ဖြည့်ထားလိုက်ပါပြီ ခင်ဗျ…
ဟုတ်ကဲ့ ဦးကျောက် လှူပါ့မယ်
ဟွင့်… မလှုရင် မန်းကိုလာပြီး ဖလား ဒဂေါက် ဂေါက်… နောက်က လိုက်ခေါက်မယ်
အလှူငွေကောက်မယ့် နောက်ဆုံးရက်နဲ့ သွားလှူမယ့်ရက်တွေကို လိုအပ်ရင် ပြန်ညှိနှို်င်း ပေးစေချင်ပါတယ်…။
လိုအပ်ရင် တစ်ကြိမ်ထဲ အပြတ်ထည့် တစ်ခါထဲ သွားလှူဆိုတာမျိုးထက် ပိုပြီး ဆွဲဆန့်နိုင်အောင်လဲ
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လထဲမှာ မန်းဂဇက် မိသားစုရဲ့ စာမူဆုပေးပွဲနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲရှိပါတယ်…
အဲဒါနဲ့ တနည်းနည်းနဲ့ ဆက်စပ် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလူတွေပဲ လေ….။
ဆုပေးပွဲရော တွေ့ဆုံပွဲရော ဟာ
နောင် လ တွေ နှစ်တွေ မှာ မှန်မှန်ကြီး ဆက်လုပ်နိုင်နေမယ်လို့ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ပါဘူး…
လုပ်နိုင်တုန်း တွေ့ခွင့်ရှိတုန်း လူစုံစုံလေး တွေ့ဖြစ်ကြရင် ကောင်းမှာဖြစ်သလို
အဲသည် လူစုံစုံလေး ကို အဲသည်ကျောင်း ခေါ်သွားရရင် မကောင်းလား ….. ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလဲ ပေါ်မိလို့ပါပဲ။
အများနဲ့အတူ လိုက်ထည့်တဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ်တိုင် မြင်ရတဲ့အခါ ပေါ်လာတဲ့စိတ် မတူပါဘူး…..
ကျုပ်က သံလျှင်ကို မကြာခဏ ရောက်ပါတယ်…
စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားနိုင်တဲ့နေ့ အဲသည်ရ်ပ်သာကို သွားပါဦးမယ်…..
ဦးပါရဲ့ အတွေးကို ထောက်ခံပါကြောင်း
တစ်ရက်တည်း (ဒါမှမဟုတ် စနေပါထည့်ပြီး နှစ်ရက်) ဆိုရင် အဆင်ပြေမလားးး လို့
မနက် ဆုပေးပွဲ လာသူတွေ ကို ဆုပေးပွဲမှာတွေ့…
နေ့ခင်း အလှူလိုက်ရင် လိုက်တဲ့သူတွေ အလှူမှာတွေ့…
ညနေ အဲ ဒီ ၂ မျိုးလုံး မလာတဲ့သူတွေကို သီးသန့်တွေ့…
အလှုတော်ငွေအတွက် သာဓု သာဓု သာဓုပါ ဦးပါရေ…
အလှုတော်မင်္ဂလာရက်ကိုတော့ အများအဆင်ပြေမည့်ရက် ပြန်ညှိပါ့မယ်…
ကျန်တာလည်း တသဘောတည်းပါ… အဲဒါကြောင့် ဇန်နဝါရီကို ရည်ရွယ်ထားတာပါ…
အဲသည့်နောက်ပိုင်းဆိုရင် ကျောက်စ်လည်း ပြန်လာဖို့ မလွယ်တော့ဘူး…
ကောက်ပေးပါမည်….. ရှယ်ပေးပါမည်…. လှူပါမည်
လူစုံမှ ပဲ …
တညား ငိုချင်းလေး လာချမယ်နော်။
ငိုနဲ့အေ… ဂလောက် လေယာဉ်လက်မှတ်ပေါတာ…
၂-ည အိပ်လောက်ပြန်လာ ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲ…
..လေယဉ်လက်မှတ်တ၀က်မျှခံမယ်ဆို စဉ်းစားမလားဟင်….အမြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့တော့ business class ..စီးနဲ့ပေ့ါဗျာ…အဟီး
ဂလို စကားးးထွက်လာတာကို အတော် ချစ်ဖို့ ကောင်းးးး
အလှူငွေ တစ်သိန်း ထည့်ပါမယ်လို့ ..
တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ အလှူပွဲကို တစ်ရက်ထဲ လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် …
အစားအသောက်အတွက် နေ့ဆွမ်းတစ်နပ်စာ (သီးစုံပဲကုလားဟင်း+ငါးခြောက်အစပ်ကြော်) ဆိုရင် ၅ သိန်းလောက်ပဲ ကျပါတယ် .. အဲဒါဆိုရင် လူ ၂၅၀၀ စာလဲ လှူပြီးသားဖြစ်ပြီး ကျွန်မတို့လဲ တစ်ခါထဲ အဲဒါမှာ စားသောက်လိုက်လို့ရမယ် ..
ဆုပေးပွဲကိုတောင်မှ အဲဒီမှာပဲ လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ရပါတယ် … (မိုက်နဲ့စပီကာမသုံးရင် အသံသိပ်မကျယ်ပါဘူး) ..
တခြားပိုကောင်းမယ့်အစီအစဉ်ရှိရင်လဲ ဆွေးနွေးကြပါအုန်း …
မဝေရေ… ကျောက်စ်လည်း အဲသည့်လိုလှုချင်တယ်…
အားမနာတန်းပြောရရင် မဝေခြံမှာ လူစု ၊ ပြီးရင်သွားလှုကြမယ်လေ
မဝေပြောတဲ့ အစီအစဉ်ကောင်းတယ် ဗျာ ။
paypal အကောင့်ကလေးလုပ်ပြီး.. ၅ဒေါ်လာ.. ၁၀ဒေါ်လာအလှူခံရင်လည်း.. လူများရင်ငွေများနိုင်တာပဲ..။
အိုဘားမားတို့.. ကင်န်ပိန်းတောင်.. အဲလိုငွေရှာတာ..။
ဟွင့်… အခုအထိ ဦးကျောက်တုံးလို့ ခေါ်နေတာ မနိပ်ပါဘူး…
သဂျီး ကျောက်စ်ရဲ့ paypal အကောင့် သိသားနဲ့…
အမေဂျီးကားက အလှုရှင်များကို သဂျီးစုကောက်ပေး ၊ ကျောက်စ် ညွှန်လိုက်မယ်
တွေးတာက… ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့.. ညာဖက်မှာ.. အလှူခံ လင်ခ့်ကလေးလုပ်ပြီး.. paypal ကတဆင့် ခဏ၀င်လာတဲ့သူတွေပါ.. ပမာဏနည်းသည်များသည်မဆို.. လှူလို့ရအောင် လုပ်ပေးချင်တာ…။
အင်မတန် ကောင်းတဲ့ idea ပါ။ (ဒီတစ်ခါတော့) :))
ဒါဆို paypal ကနေ လွှဲပါ့မယ်။
၀က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ညာဖက်မှာ အလှူခံ လင်ခ့်ကလေးတွေ့ပါတယ်…
သေခြာအောင် ထပ်ပြောပါ့မယ်… ကျောက်စ်ရဲ့ အကောင့်က…
u.kyauk.gz@gmail.com ပါ ခင်ဗျား…
Currently PayPal accounts in Hong Kong are only able to send payments. This recipient is not eligible to receive funds.
ဒါပဲတက်နေသဗျ..။ နည်းလို့လားဆိုပြီး ..၁၀ဒေါ်လှကြီးများတောင်.. တိုးလှူတာ.. ဒါလည်းမရ..။
အောက်က၀က်ဘ်ဆိုက်လေးကြည့်ပြီး.. နည်းနည်း.. Fix ဦးဗျ..
ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး မန့်ဖို့ကို ကွန်အဆင်မပြေတာနဲ့ အတော်လေးတောင် နောက်ကျသွားတယ်။
အလှူ ငွေ၁သိန်း ထည့်ပါမယ်။
ကျောက်စ်ပြောသလိုပဲ ဂေဇက်မိသားစုနာမည်နဲ့ ကမ္ဗည်းထိုးပြီး လှူ တာကို ပိုသဘောကျတယ်။
သာဓု x ၃ ပါ အန်တီမမရေ… စာရင်းတို့လိုက်ပြီ…
ထပ်လှုချင်ရင်လည်း ရပါသေးတယ် ခီမြ…
​ဘောနပ်​စ်​​စောင့်​​တော့ အဆင်​​ပြေတာ​ပေါ့ အူး​လေးရယ်​.. သများတို့အတွဲလည်းလှူပါမယ်​လို့..
ဒါနဲ့ အဘိုးအဘွား​တွေနဲ့ စကား​ပြော​ဖော်​ရ​အောင်​ ဟိုတစ်​​ယောက်​ကို အ​သေအချာ​ခေါ်ခဲ့မယ်​ :D
သာဓု ကွယ်… ကျောက်စ်တူမက အားကိုးရတယ်…
နီးစပ်ရာလည်း အလှုခံပေး ၊ ဟို ကျက်တူရွေးဂျီးကိုလည်း စကားသင်… ခွိ ခွိ
..ကိုကြီးကျောက်စ်….တားတားတို့ ( တားတား ကချင်နုထွားကြီး +လေယာဉ်မယ် ချစ်တီးမကြီး )
.. နှစ်သိန်း စာရင်းတို့ပေးပါခင်ဗျာ..
…မှားလို့ .( .နှစ်သိန်း + ငါးဒေါ်လာ ) …တဂျီးကို ချစ်လို့..သူ့နောက်ကလိုက်တာ
အားရသဗျာ… ကျောက်စ် အလှုရည်ရွယ်ချက်ပြည့်တယ်…
သက်ကြီးရွယ်အို ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီရတာ ပီတိဖြစ်တယ်ဗျာ ….
..တကယ်က ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ အစ်ကိုကြီး ဦးဆောင်တဲ့နောက်…ညီတစ်ယောက်အနေနဲ့တတ်အားသမျှ ..ပါဝင်ခြင်းပါခင်ဗျ…ဂုဏ်ယူလေးစားပါကြောင်း ( တကယ်က ဖြူဖွေးပိုက်ဆံ..အဟိဟိ )
ခီများကို မိတ်ဆွေရင်းမို့ ဘေးမဲ့ပေးထားတယ်…
စာရေးတာ အနှောင့်အသွားလွတ်အောင် မရေးဘူး….
အလှူအတွက် ၁သိန်း ထည့်ပါမယ်…
ညီမလေး ဒီကေဘီအေကိုလည်း သာဓုပါ…. အဟိ
ဦးကြီးကြောက် ဘာမှမသိ… ခွိ ခွိ
အော်… သူများတွေ အလှူငွေ ထည့်နေလိုက်ကြတာ… အားကျစရာပဲ… ပိုက်ဆံလဲ ရသလောက် ကောက်ခဲ့ပါ့မယ်.. မုန့်နဲ့ ကော်ဖီ အတွက်လဲ ရုံးက အလှူခံထားပါတယ်… ဟဲ… လူအား နိုင်သရွေ့ လုပ်ထားကြောင်းပါ…
ဂျူနီယာ ကိုရေမြင်းရေ… သာဓုပါဗျ
ကျနော့ သူငယ်ချင်း ဝါလေးက …
အလှူအတွက် စလုံး ၁၀၀ ပေးထားတယ်။
အဲဒါ ကိုမတ်ဆီကို မြန်မာ ပိုက်ဆံလွှဲလိုက်မယ်နော်။
အလှုအကျိုးကြောင့် အစဉ်ပြေပါစေလို့… အဟိ
ဘုရား သဂျား မလို့….
အဲဒီ အလှူနေ့ဟာ Sunday + အချိန်ပို မဝင်ရတဲ့နေ့ ဖြစ်ပါစေသား…
ဂွဇက်မင်းတား မလာလို့ ဖြစ်မလား…
အိမ်ပေါ်ကနေ ကုတ်နဲ့ကော်ချမယ်… အားဟိ
ရွာ့အလှူ တိုင်း ပါနေကျ မို့
စာရင်း တို့ ထားပေးပါ ဗျို့ …..
ကျောက်စ်အမတွေ ဒါမျိုးဆို လက်မနှေးမှန်းသိပြီးသား…
သမီးလည်း လှူမယ်နော်…။ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လေ…။
အရင်ရွှေပြည်သာသီလရှင်ကျောင်းအလှူတုန်းကတော့ MICT Park ထဲမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ဆီသွားပြီး အလှူငွေပေးလိုက်တယ်။ အလှူငွေကော အလှူကိုရော လိုက်ပါနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်ချင့်..။
နည်းတယ်များတယ်မဟုတ်… လှုနိုင်ရင် လှုပါသမီးရေ…
ဖုန်းသာဆက်လိုက် ရွာ့အကိုအမတွေ ကူကြလိမ့်မယ် သမီး…
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကအဲ့ကိုရောက်သွားမိတယ်။ ဘိုးဘွားတွေ တဲဆောင်တစ်ခုမှာ နေထိုင်ရတာအတော်လေး ကျပ်တည်းတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဆောင်မှာ လူ ၅၀ မှ ၁၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။သူမှာထူးခြားချက်က ပြုစုမယ့် ၀န်ထမ်းမရှိတာပါပဲ။နောက်တစ်ခုက ဆရာတော်က သဘောကောင်းတော့ ဘယ်လိုလူမဆိုလက်ခံတာပါတစ်ခု။ သတ်မှတ်စည်းကမ်းမရှိတာတစ်ခုတော့ သိပ်ဘ၀င်မတွေ့ဘူး။ ဥပမာ အရက်သမားဆောင်လိုမျိုး ရှိတာမျိုးလေးတွေပေါ့။ အရက်သမားအဆောင်ဆိုတာ တကယ့်အရက်သမားတွေပဲ။ ညနေဘက်ဖြစ်ဖြစ် အပြင်ထွက်အရက်သောက် ကြသတဲ့ ရွာထဲကလူတွေနဲ့လည်းရန်ဖြစ်ကြသတဲ့။တစ်ချို့ဆိုအရမ်းဆိုးလွန်းလို့ လည်းကူးကို ပြောင်းထား တာမျိုးလည်းရှိသတဲ့။နောက် စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေလည်းရှိသတဲ့..။ ဆရာတော်ရဲ့ ၀ါဒကတော့ အတင်းအကျပ် မခိုင်းဘဲ ဘာသာရေးကို ကိုယ့်စိတ်လေးနဲ့ကိုယ်လုပ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေပါ။သဘောက စိတ်ပါမှလုပ်ဆိုတာမျိုးပါ။ အဲဒီမှာက ဘိုးဘွား တွေအပြင် ဘယ်လိုအယုတ်အမြတ်အလတ်မရွေးလက်ခံတယ်။ ဘာပဲပြောပြောတစ်ချို့ ဘိုးဘွားတွေ နေရထိုင်ရတာဆင်းရဲတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီမှာလှူပြီးပြီးဆိုတော့ အခု မပါနိုင်တာတောင်းပန်ပါတယ်။ အားလုံးအလှူလေးကို သာဓုခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မှန်တာပြောရရင် အရင်တုန်းက သဘာဝရိပ်သာအကြောင်းစသိတုန်းက (လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်ရှိမယ်) စိတ်ထဲမှာ ဘ၀င်မကျခဲ့ဘူး .. ဒုက္ခသည်စခန်းကြီးလိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုလဲ မနှစ်မြို့ခဲ့ဘူး ..
ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆရာတော့်အကြောင်းသိလာချိန်မှာ နားလည်လာခဲ့တယ် ..
အဓိက အစွဲတစ်ခုကို ပြုတ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဆရာတော့်ကြောင့် ဘာစွဲ ညာစွဲ ဘာမှမထားတော့ပဲနဲ့ အပြစ်တင်ခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်းလဲ မလုပ်တော့ပဲနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်လေးပဲ လှူနိုင်တဲ့အခါလှူလိုက်မယ် မလှူနိုင်လဲ ဘာမှမဖြစ်ပဲ ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်တော့တယ် ..
ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် uncle gyi ခင်ဗျား…
အလှုတော်ငွေကို ဒီပို့စ်မှာ ဖော်ပြပေးပါ့မယ်…
ကျောက်စ် သော်သော်က ငါးသောင်းလှုထားပါတယ်။ update လုပ်ပေးပါအုံး
မွသဲရေ update လုပ်ထားပြီးပါပြီ…
သာမီးသော်သော်ရေ… သာဓု… သာဓု… သာဓုပါကွယ်…
(အမေရိကန်ဆိုတာက တပြားမှ မလျှော့တဲ့) .ကိုမိုးနဲ့မိသားစု-ယူကေ ရဲ့အလှူ ကျပ် 315000/- လက်ခံရရှိထားပါကြောင်း။
ဒီပွဲမှာ.. အမတော်ပဒုမ္မာပါမလာလို့ကတော့.. ကကြောင်ကြီးကို.. အမြီးဖြတ်ပြီး.. သူချစ်တဲ့.. ဘင်္ဂလီမတွေနဲ့အတင်းပေးစားပစ်မယ်… လို့..။
ဖြတ်ပြီးရင် ..အဲ့အမြီးလေး. .. ကျနော့်ကို ပါဆယ်ထုတ် ပို့ပေးနော့.. သူဂျီး ။
ဒေါ်ဖွားမေ အကြော်အိုးထဲ..မုန့်နှစ်လေးကပ်ပြီး..ထည့်… ရေနွေးကြမ်းနဲ့ မြည်းရအောင်..
ကိုမိုးနဲ့မိသားစု-ယူကေ ရဲ့အလှူ တော်အတွက်…
သာဓု… သာဓု… သာဓုပါခင်ဗျာ…
အန်တီဒုံလည်း ကျောက်စ်တို့ကို ပစ်မထားပါနဲ့ခင်ဗျာ…
အလှူကတော့ ပုံပေါ်လာပြီ နော် အားရ ဘို့ ကောင်းပါ၏
နဲနဲစောသေးတော့ ခပ်အေးအေးပဲ ကိုပေါက်ရေ…
ဒီဇင်ဘာလောက်ဆိုရင်တော့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါကြောင်း…
သီတာရေကြည် စိတ်လက်ရွှင်လန်း လှူဒါန်းသည်မှာ
အဟိ… ကျောက်စ် ဂွပြောတယ်လို့ ထင်ကြမှာပဲ…
ဘာ… ဆုမှ မတောင်းပါ… ပီတိနဲ့တင် ကျေနပ်ပါပြီ…
ဂွဇက် ရွာသားတစ်ဦး ဆိုတာ ဘယ်ဒူဒုံး ???
နံမယ်လည်း ပြောဘူး ….
ဒါကတော့ မတရားဘူး …
ကျော်ဒို့လည်း ဒီအလှူမှာ ဝင်ကူပါမယ်လို့ …
အဲ့ဒါ လာပြောဒါ …
ကိုရင်အံတို့ မကူလို့ ဘယ်ဖြစ်မှာတုန်းဗျ…
ဂဇက်ကနေ ကမကထ လုပ်ပေမယ့် လူတိုင်း ပါဝင်လှုဒါန်းနိုင် ကူညီနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား…
ကော်မန့် ၁၀၀ပြည့်အောင် လာရေးတာ ကိုကိုကျောက် ရဲ့။
.ကျုပ်ရုံးက အညာတမာက အလှူငွေ၃၀၀၀၀ လှူထားပါဂျောင်းနဲ့ ကိုဆာနဲ့တွေ့ရင်ပေးလိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း
သာဓု… သာဓု… သာဓု… ပါ ကိုအညာတမာ ခင်ဗျား…
ဒီရက်ထဲမှာ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ အလှုတော်အစီအစဉ်အတွက် ထပ်ဖြည့်ရေးပါဦးမယ် ခင်ဗျာ…